अक्सिजन अभाव सरकारकै कारण चुलियो, व्यवसायी भन्छन्– समस्या झन् विकराल हुनसक्छ , जनता नै सचेत हुनु पर्ने ! | Citizen FM 97.5 Mhz
अक्सिजन अभाव सरकारकै कारण चुलियो, व्यवसायी भन्छन्– समस्या झन् विकराल हुनसक्छ , जनता नै सचेत हुनु पर्ने !
काठमाडौं– कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै जाँदा मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश निजी अस्पतालले थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै सूचना जारी गरे।
अक्सिजनको अभाव भएका कारण थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने निजी अस्पतालहरुको जिकिर छ।
नेपाल मेडिकल कलेज, मेडिसिटी, ओम, बयोधा, अल्का, मेडिकेयर, हेल्पिङ ह्याण्ड, दीर्घायु, गुरु, करुणा लगायत अस्पतालले अक्सिजनको अभाव भएकाले थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने घोषणा गरे। यो क्रम बुधबारसम्म पनि जारी छ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिरका निजी अस्पतालले पनि अक्सिजन अभावका कारण थप बिरामी भर्ना गर्न नसकिने भनेर सूचना जारी गर्न थालेका छन्। अस्पतालहरुले अक्सिजन अभावका कारण बिरामी भर्ना गर्न नमानेपछि देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै थप जटिलतातर्फ धकेलिन थालेको छ।
कतिपय अस्पतालले त बिरामी भर्ना गर्न ल्याउँदा अक्सिजन पनि सँगै बोकेर ल्याउन उर्दी जारी गरेका छन्। त्यसमध्येको एक हो, नेपाल मेडिकल कलेज। नेपाल मेडिकल कलेजले उपचाररत बिरामीको हकमा पनि अस्पतालका तर्फबाट अक्सिजन उपलव्ध गराउन नसकिने भएकाले बिरामी आफैंले ब्यवस्था गरेमा उपचार गराउने नत्र डिस्चार्ज गर्न बाध्य हुने भनेर सूचना नै निकाल्यो। अस्पताललाई अक्सिजन उपलव्ध गराउने उद्योग विग्रेकाले यो अवस्था आएको मेडिकल कलेजलको भनाइ छ।
कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचारमा अक्सिजनको चरम अभावको अवस्था सिर्जना भइरहँदा अक्सिजन उत्पादनमा संलग्न उद्योगीहरुले भने सरकारको व्यवस्थित योजना नहुँदा अहिले धेरैतिर एकैपटक समस्या देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उद्योगहरुमा अक्सिजन सिलिण्डरको कमी नभए पनि उत्पादनमा कठिनाइ भइरहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ।
सरकारकै विभिन्न निकायहरुको बीचमा समन्वय नहुँदा अहिलेको समस्या देखिएको अक्सिजन उत्पादक संघका अध्यक्ष अनिल शारडाले बताए। ‘अहिले सीसीएमसीले आफूले तोकेर सूची दिएका अस्पतालहरुमा मात्र अक्सिजन उपलव्ध गराउन भनेको छ, तर स्थानीय तहहरुले सीसीएमसीको निर्णय नमान्नोस् भन्दै पत्र लेखेका छन्,’ शारडाले भने, ‘अक्सिजन उद्योगमै सर्वसाधरणहरु लाइन लागेका छन्। उत्पादन सीमित छ, माग असीमित छ। कसरी धान्ने हो थाहा छैन।’
केही समय अगाडि सिलिण्डरको समस्या देखिएको भएपनि अहिले भने त्यो समाधान भएको उनले बताए। अस्पताल भन्दा बाहिर अहिले अन्य उद्योगलाई अक्सिजन दिन नपरेका कारण सिलिण्डरको समस्या धेरै नभएको, तर सरकारले जतिसक्दो छिटो खाली सिलिण्डर उपलव्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले भएको समस्या भनेको प्रोडक्सनको हो। बजारमा आजभन्दा भोलि गम्भीर बिरामीको संख्या बढेको बढ्यै छ,’ शारडाले भने ‘काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक २२ हजार सिलिण्डरको माग छ। ८ हजारको भन्दा धेरै उत्पादन हुन सकेको छैन।’
सीसीएमसीको निर्णय व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ। ‘सीसीएमसीले भनेको अस्पताललाई मात्र सीधै दिने निर्णय व्यावहारिक नहुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगहरुको लाखौं–लाख उधारो दिएका छन्। उक्त सिलिण्डर अस्पतालमा रहेको छ।’ सरकारले यसमा विचार नगरी अक्सिजन उपलव्ध गराउने सूची बनाएको उनको वुझाइ छ। उद्योगहरुले यसलाई नमान्ने भएकाले समस्या हुने देखिएको उनले बताए।
सरकारले प्रहरी लगाएर सिलिण्डर जम्मा गर्दै भर्ने भनेपछि यसले समाधान नगर्ने उनको वुझाइ छ। ‘उद्योगवालालाई लगेर थुनेर कसले उद्योग चलाउने हो ?’ उनले भने, ‘उद्योगी र सरकारका बीचमा यस्तो समयमा सम्वन्वय हुनुपर्नेमा द्वन्द्व वढ्दा झन अभाव सिर्जना हुन्छ, त्यसको मारमा बिरामी पर्नेछन्।’
यस्तै, स्थानीय तहहरुले आफ्नो सिफारिसमा मात्र उपलव्ध गराउन दबाब दिन थालेकाले अर्को समस्या शुरु भएको उनको भनाइ छ। ‘जस्तो मेरो उद्योग रहेको क्षेत्रको दक्षिणकाली नगरपालिकाले अहिले हामीलाई सीसीएमसीको निर्णयलाई मान्यता दिएर अक्सिजन नदिन पत्र लेखेको छ,’ उनले भने, ‘यो नगरभित्रको कुन अस्पताललाई अक्सिजन दिने हो त्यो कुरा नगरलाई मात्र थाहा हुने भन्दै पत्र लेखेको छ। हामी कसलाई मान्यता दिएर अक्सिजन दिने ?’
त्यस्तै, उद्योगमै आएर लाइन बसेका सर्वसाधरणको अवस्थाले झन चिन्तित बनाएको उनले बताए। ‘सर्वसाधारण नागरिक खाली सिलिण्डर बोकेर दिनभर लाइनमा बसेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुको पीडा झन दर्दनाक सुनिन्छ। कसरी नदिने? अवको अवस्था झन् जटिल हुने देखिएको छ।’ बिरामीका आफन्तहरु अक्सिजन उद्योगमै आएर लाइन लाग्न थालेपछि अवस्था झन् भयावह हुने उनको अनुमान छ।
कान्तिपुर अक्सिजन उद्योगका म्यानेजर कुमार चुडालले अक्सिजनको अभाव अझै बढ्नसक्ने खतरा रहेको बताए। सरकारले भएका सिलिण्डरहरुको रेकर्ड राखेर व्यवस्थित वितरण भन्दा कोटा तोक्न हतार गरेकाले आगामी दिनमा संक्रमित वढेसँगै यो समस्या झन् जटिल हुने उनको भनाइ छ।
अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरु अहिले दोहोरो मारमा परेको पनि उनी सुनाउँछन्। महामारीका समयमा अक्सिजन अभाव नहोस् भनेर उद्योगहरुले काम गरिरहेको, तर अहिले उद्योगमै समेत सर्वसाधारण लाइन लाग्न थालेकाले झन् भयावह समस्या आउने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए।
हास्य कलाकार किरण केसी राता मकैको नेता लाई कटाक्षः आफ्नेा दिमाख पनी फेर,छिछिछि गन्धा राजनिती